Dalxiiska Malta oo Safar u fududeynaya Dalxiisayaasha ka socda Mareykanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Jabhada Malta » Dalxiiska Malta oo Safar u fududeynaya Dalxiisayaasha ka socda Mareykanka
Jebinta Wararka Caalamka • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Jabhada Malta • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Dalxiiska Malta Samaynta Socdaalka U Fudud ee Dalxiisayaasha USA - halkan lagu arkay waa Valletta
Jimcihii, Luulyo 23, 2021, Hay'adda Dalxiiska Malta ayaa heshiis la saxiixatay Verifly oo looga golleeyahay in la siiyo xal aan dhib lahayn dalxiisayaasha ka imanaya USA, ee u safraya Malta. Naqshadaynta-gaarka ah ee VeriFLY waxay hubisaa in xogta isticmaaleha la sugay oo loo isticmaalo oo keliya ujeeddada iyo muddada loo baahan yahay si loo qanciyo shuruudaha safarka.
Socotada Maraykanka ilaa Malta waxay heli doonaan fursad ay ku xaqiijiyaan caafimaadkooda iyo inay keenaan dukumentiyo kale.
Barnaamijka VeriFLY wuxuu gacan ka geystaa hagaajinta tallaalka COVID-19, ansixinta dukumintiga, wuxuuna muujiyaa natiijooyin si cad oo saaxiibtinimo leh.
VeriFLY waxay leedahay in kabadan 1.5 milyan isticmaaleyaal firfircoon adduunka oo dhan.
Intaa waxaa dheer, adeegsadayaasha VeriFLY waxay ilaalin doonaan kontaroolo adag sida, goorta, iyo cidda lala wadaagayo macluumaadkooda. Hadda oo leh in ka badan 1.5 milyan oo isticmaaleyaal firfircoon adduunka oo dhan, VeriFLY waa boorsada dhijitaalka ah ee ugu ballaarneyd adduunka ee la abuuray si loo caawiyo dadka safarka ah iyo ka-qeybgalayaasha dhacdada si deg-deg ah oo aamin ah inay la kulmaan shuruudaha COVID-19 ee ay u socdaan.
Socotada ka yimaada Mareykanka ilaa Malta waxay heli doonaan fursad ay ku xaqiijiyaan fayoobaantooda oo ay ku siiyaan dokumentiyo kale, sida ay u baahan yihiin Mas'uuliyiinta Caafimaadka Malta, iyada oo loo marayo barnaamijka VeriFLY kaas oo gacan ka geysanaya hagaajinta tallaalka COVID-19, ansixinta dukumintiga, oo soo bandhiga natiijooyin cad , hab akhris-saaxiibtinimo leh.
Ka dib markay ku abuuraan astaan ​​aamin ah aaladda moobilkooda, rakaabku waxay ku soo rogi doonaan macluumaadka tallaalka iyo dukumiintiyo kale sida tooska loogu baahan yahay ee barnaamijka VeriFLY. App-ka VeriFLY wuxuu xaqiijin doonaa in macluumaadka rakaabka uu waafaqsan yahay shuruudaha ay dejisay Malta wuxuuna muujinayaa baasaboor fudud ama fariin guul darreysata. Intaa ka dib, rakaabka waxaa lagu hagi doonaa inuu buuxiyo Foomka Goobta Rakaabka si uu u galo Malta.
Barnaamijka VeriFLY, oo laga heli karo Google Play iyo Apple App Store, ayaa u oggolaan doona adeegsadayaasha inay dhaqaajiyaan kaarka “Safarka Malta”, kaas oo koobaya shuruudaha si loo galo Malta, oo loo habeeyay liiska hubinta isticmaalaha, kadib markii la dhammaystiray dhammaan shahaadooyinkii loo baahnaa.
“Heshiiskani wuxuu muujinayaa awoodda Malta inay si degdeg ah ula qabsan karto caqabadaha cusub ee la xiriira safarka. App -ka VeriFLY wuxuu u adeegi doonaa sidii aalad muhiim u ah nabadeynta maanka ee dadka Mareykanka iyo guud ahaan caafimaadka dadweynaha Malta. Waxaan sii wadi doonaa inaan si adag ushaqeyno si aan u xaqiijino in waaxda dalxiiska maxalliga ah ay uraacdo dariiqa ay ugu soo kabaneyso soo kabashada si waara oo mas'uuliyad leh, ”waxaa loo qoondeeyay Wasiirka Dalxiiska iyo Ilaalinta Macaamiisha Clayton Bartolo
“MTA waxay ku faraxsan tahay inay heshiiskan la gaarto shirkadda VeriFLY, taas oo hadda u fududeyn doonta dalxiisayaasha ka socda USA inay booqdaan Malta, iyadoo u samaynaysa goob-joogsi dukaanka dalxiisayaasha inay ku soo gudbiyaan dhammaan dokumentiyada loo baahan yahay ka hor intaysan dhoofin. Tani waxay la micno noqon doontaa in dalxiisayaashu ay si nabad gelyo leh uga tagayaan garoomadooda diyaaradeed iyagoo ka warqaba in dukumiintiyadooda oo dhami ay hagaagsan yihiin, sidaas darteedna ay bilaabayaan nasashadooda nasashada laga bilaabo marka ay diyaaradda fuulaan, heshiiskan, Mas'uuliyiinta Malta waxay si rasmi ah u taageerayaan adeegsiga VeriFLY si si hufan loogu soo galo dalka.